सावधान ! नेपालमा पनि भेटियो ‘मङ्कीपक्स’का बिरामी - Mitho Khabar
सावधान ! नेपालमा पनि भेटियो ‘मङ्कीपक्स’का बिरामी
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on सावधान ! नेपालमा पनि भेटियो ‘मङ्कीपक्स’का बिरामी
नेपालमा ‘मङ्कीपक्स’ भाइरसको बिरामी भेटिएका छन् । ‘मङ्कीपक्स’ संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका एक युवकमा लक्षण देखिएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए ।
ती युवक दुबईबाट हालै नेपाल आएका थिए । बिरामी नेपाली २७ वर्षीय युवक रहेको र उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
याे पनि, लोक दोहोरी गित अहिलेकाे समयमा सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै आएका छन् । कति गितहरुले त करोड क्लव समेत प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने वालामा छन् । यसै सन्दर्भमा बजारमा धेरै सर्जकहरुले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया पाएका छन् ।
सोहि क्रममा सपना रोकाको नयाँ दोहोरी गित ‘नन्दनी’ भखर्रै सार्वजनिक भएको छ । प्रसिद्ध दोहोरी गायक खेम सेन्चुरी र गायिका सपना रोकाको आवाजमा सजिएको उक्त गितमा गायक एवम् सर्जक विक्रमबाबु विश्नकर्माको उत्कृष्ट शब्द सृर्जना एवम् सर्जक नन्दु परियारको संगित रचना रहेको छ ।
प्रेमिकल जोडीहरुको माया प्रेमको विषयबस्तु झल्काईएको उक्त गीतको अडियो र भिडियो दुवै उत्कृष्ट वनेको छ ।बसुनिल क्षेत्रीको उत्कृष्ट निर्देशन एवम् कोरियोग्राफीमा तयार भएको गितको म्युजिक भिडियोमा सुनिल क्षेत्री र कविता न्यौपानेको डान्सिङ्ग फिचर एवम् अभिनय रहको छ ।
गितको म्युजिक भिडियोलाई करन चौसिरले छांयाकन एवम् विकास ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन् । गितको म्युजिक भिडियो सपना रोकाको अफिसियल युटुव च्यानलबाट बजारमा सार्वजनिक भएको छ । हेर्नुस् अब पूरा भिडियाे गित:-
शिक्षक विद्यार्थीका लागि १० हजारमै स्कुटर
कप्तान किरण चेम्जोङ मासिक कति कमाउँछन्? कति छ उनको सम्पति?
सावधान ! थप तीन देशमा फैलियो मङ्कीपक्स भाइरस, नेपालमा पनि यसकाे जाेखिम
June 18, 2022 mithokhabar
कोरोना भाइरसको आतंकः चीनमा रहेका २ जनाले भरे नेपाल फर्किने फारम, नेपालमा कहाँ राख्ने टुंगो छैन